Apple waxay kala xaajoon kartaa iibsashada Tidal | Wararka IPhone
Apple ayaa laga yaabaa inay kala xaajooto iibsiga Tidal
Shalay, Juun 30, adeegga muusigga ee Apple Music wuxuu noqday hal sano jir. Sannadkan koowaad ka dib, lshirkaddu waxay ku guuleysatay inay gaarto 15 milyan oo macaamiil ah, Jaantus aan haba yaraatee xumaanaynin marka loo eego inay ku cusub tahay suuqa, inkasta oo ay heshay caawimaadda dhammaan nidaamka deegaanka ee laga heli karo: IOS, tvOS, Android iyo macOS. Apple waxay aqoonsatay cillada waxayna gabi ahaanba dib u habeyn ku sameysay arjiga imaatinka iOS 10, maadaama aan horey u aragnay isticmaaleyaal aan adeegsaneyno beta-kii ugu horeeyay ee iOS 10.
Apple waxay iibsatay Beats 2014 bilyan oo doolar oo adeegsi muusig ah sanadkii 3.000, oo ah adeeg la jaanqaaday baahidiisa si ay u bilawdo Apple Music sanad kadib, Juun 30, 2015. Tan iyo markaas, adeegsadayaal badan ayaa muujiyay dhibaatadiisa jahwareer ka dhashay isticmaalka dalabkaaga, gaar ahaan barnaamijka IOS.
Sida lagu soo warramey The Wall Street Journal, Apple waxay wadahadal la yeelan doontaa heesaaga Jay Z iibso adeegga muusikada ee Tidal. Sida wargeysku sheegay, xogtaan waxaa si qarsoodi ah u helay ilo wareedyo la xiriira wadahadalada. Sida muuqata labada shirkadoodba waxay qabteen wareysiyo kala duwan si ay u tijaabiyaan biyaha oo ay u arkaan haddii ay jirto runtii dano labada dhinac ah. Haddii gorgortanku aakhirkii miro dhalo, iibsigani wuxuu dhiirigelin hor leh u noqonayaa adeegga muusigga ee hoorinaya ee Apple Music.
Afhayeen u hadlay shirkadda Tidal ayaa sheegay in aysan wax wadahadal ah la yeelan shirkadda Apple. Maaha kii ugu horreeyay, waxaanan filayaa inaanay noqon doonin kii ugu dambeeyay, ee la daabaco wararka xanta ah ee ku saabsan danta suurtagalka ah ee shirkadaha kale inay iibsadaan Tidal. Dhowr bilood ka hor, warar xan ah ayaa soo ifbaxay oo sheegaya in Samsung ay damacsan tahay inay iibsato si ay u ballaariso adeeggeeda muusigga qulqulaya, laakiin ugu dambeyn wadahadallada ma aysan mira dhalin
Waxa xantaani tilmaamaysaa waa taas Milkiilayaasha gawaarida ayaa doonaya inay ka takhalusaan adeeggan muusikada, maadaama haddii kale wararka la xiriira iibsashadaada suurtagalka ah aan la daabici doonin dhowrkii biloodba mar. Waqtigaan la joogo, iyo sida ku xusan tirooyinka rasmiga ah ee Tidal, madal qulqulka muusikada ee farshaxanleyda, waxay leedahay 4.2 milyan oo macaamiil ah. Kuwaas oo ah 4.2 milyan oo macaamiil ah, 45% ayaa bixinaya $ 19,99 khidmadda si ay ugu raaxaystaan ​​muusig tayo sare leh, mid ka mid ah faa'iidooyinka kaliya ee Tidal u fidin karo muusikada jecel.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » Tartanka » Apple ayaa laga yaabaa inay kala xaajooto iibsiga Tidal